मन्टेश्वरी किन गएकी थिईन हराउनु भन्दा एकदिन अघि सिम्रन ? प्रिन्सीपलले खोलीन् पोल (भिडियो हेर्नुस्) — SuchanaKendra.Com
मन्टेश्वरी किन गएकी थिईन हराउनु भन्दा एकदिन अघि सिम्रन ? प्रिन्सीपलले खोलीन् पोल (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं । चितवनवाट १९ दिन देखि हराएको भनिएकी सिम्रन घरवाट निस्कनु एक दिन अघि मन्टेश्वरीमा जागिर खान भन्दै पुगेको खुलेको छ । मन्टेश्वरीमा पुगेर पनि उनी फोनमा निकै ब्यस्त भएको देखिएको संचालकले बताएकी छन् ।
मन्टेश्वरीको संचालकले पनि सिम्रन फोनमा निकै नै ब्यस्त देखिएको बताइन् । सिम्रनलाई उनकै जेठानीले जागिर खानका लागि मन्टेश्वरीमा लिएर गएको बताइन् । संचालक महिलाले पनि सिम्रनलाई केही दिन यता देखि नै चिन्दै गरेको बताइन् । जुन दिन सिम्रन मन्टेश्वरीमा पुगीन् त्यती बेला पनि फोनमा नै ब्यस्त थिइन् । मन्टेश्वरीमा गएर कामको बेलामा पनि उनी फोनमा नै ब्यस्त भएको देखेर मन्टेश्वरीका अन्य कर्मचारीले कुरा गरेको उनले बताइन् ।
सिम्रनले मन्टेश्वरीको तालिम नलिएको भएपनि काम गर्दै पनि जाने तालिम पनि लिनेगरी काम सुरु गर्ने सर्तमा उनलाई राख्ने निर्णय भएको थियो । सिम्रनलाई एक महिना अघि देखि चिनजान भएको मन्टेश्वरीको संचालकले बताएकी छन् ।
सिमरन भारतको कानपुरमा बस्दा त्याहांका एक जना युवाले सिमरनको घर अगाडी आएर पटक पटक ब्ल्याक मेल गरेको र सिम्रनको लागि आफुले धेरै पैसा खर्च गरेको अब त्यसलाई उठाएर लैजाने बताउँदै आएको कुरा सिम्रनका ससुराले खुलाएका छन।
त्यस्तै उक्त केटालाई ससुरा र बुहारीको २ वटा औंठी बेचेर २० हजार रुपैयाँ तिरेको बताएका छन। आफुले पहिले बुहारीलाई छोरीको जस्तै माया दिंदा पनि उनले माया चिन्न नसकेको र पटक पटक फोनमा धेरै मान्छे संग बोल्ने नगर भन्दा नमानेको कारण र भारतमा छिमेकिको अगाडी बेइज्जत हुने साथै बुहारीको जीवन रक्षा गर्न नेपाल पठाएको बताएका छन। सिम्रन परिवारवाट सम्पर्क विहिन भएको १९ दिन पुगीसकेको छ ।
लामो समय भारतमा बसेका सिम्रन र उनका पति दुई महिना अघि मात्र नेपाल आएका हुन् । उनका श्रीमानले सिम्रन अत्याधिक मोवाइलमा भुल्ने र आफुले भन्दा पनि नमान्ने गरेको बताएका छन् । मोवाइलमा धेरै भुल्ने गरेका कारण उनीहरुकाबीच बेलाबेलामा झगडा समेत हुने गरेको थियो ।
सिम्रन हराउनु भन्दा एक दिन अगाडी जेठानी गीताको सहयोगमा एक जना गिताकै साथीको मन्टेश्वरीमा जागिर गर्ने भन्दै गएको भन्ने कुरा खुल्नमा आएको हो । सिमरन अहिले हराई रहंदा सबैले सिमरनलाई जहाँ भए पनि छिट्टै सम्पर्कमा आउन र परिवारलाई दुख नदिन आग्रह गरेका छन। गीता अर्थात सिमरनको जेठानीले सिमरन नेपाल मै बस्ने भए पछी अब उनीहरुको भविष्य राम्रो होस् भनेर उनलाई जागिर लगाउन आफुले सहयोग गरेको बताएकी छिन। थप प्रिन्सिपलको मुखबाट सुन्नुहोस।